(4) ကြိမ်မြောက် …ထီဖွင့်ပွဲမှာ..သိန်း ၅၀၀ ဆု​ပေါက်​သွားတဲ့ တပ်​သား​လေး – ရှအေလငျး
(4) ကြိမ်မြောက် …ထီဖွင့်ပွဲမှာ..သိန်း ၅၀၀ ဆု​ပေါက်​သွားတဲ့ တပ်​သား​လေး
(4) ကြိမ်မြောက် ထီဖွင့်ပွဲမှာ..သိန်း ၅၀၀ ဆု​ပေါက်​သွားတဲ့ တပ်​သား​လေး
တပည့် ကျော် ကွန်ဒီ ၁၇. တသ မင်းမိုးသက်ထွေး ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ပေါက်ပါတယ် ထပ်တူ ဝမ်းသာ မိပါတယ် ဒ. ၉၂၈၉၆၉
Credit- Zawng Oo
(4) ကွိမျမွောကျ ထီဖှငျ့ပှဲမှာ..သိနျး ၅၀၀ ဆုပေါကျသှားတဲ့ တပျသားလေး
တပညျ့ ကြျော ကှနျဒီ ၁၇. တသ မငျးမိုးသကျထှေး ကပျြသိနျး ၅၀၀ ပေါကျပါတယျ ထပျတူ ဝမျးသာ မိပါတယျ ဒ. ၉၂၈၉၆၉
အိမ့်ချစ်ရဲ့ ဂီတ အမွေတွေကို နောက်ထပ်သမီးလေး တစ်ဦးထံ လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်တဲ့...
နိုင်ငံတော်အလံ… အလေးပြုခြင်းရဲ့အကျိုး… ကျောင်းသား ၂၀...
အဆုိုတော်ဂျီလတ်၏ ညီ တေးရေးကမ္ဘာ အသတ်ခံရမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း